Waraysi-Waa sidee xiriirka wasaaradaha waxbarashada Puntland iyo DFS. – Radio Daljir
Waraysi-Waa sidee xiriirka wasaaradaha waxbarashada Puntland iyo DFS.
Luulyo 30, 2016 9:30 g 0
Madaxweynaha dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa kulan soo dhoweyn iyo dhiirri gelin ah la qaatay 13-kii arday ee ugu sarreeyey imtixaankii shahaadiga ahaa e dugsiyada sare ee Puntland ee sannad dugsiyeedkii 2015-2016.
Hadaba Wasiir kuxigeenka Wasaarada waxbarashada, dawlada puntland Dr. Maxamed Cali Faarax ayaa radio daljir ugawaramay kulanka abaal marinta uu sameeyay madaxweynaha sida uu udhacay iyo cidii soo abaabushay . Wariye Xasan heykal oo kusigan Xarunta Daljir ee Bosaaso ayuu uwaramay
DHEGEYSO-Bandhig buugeed lagu soo xiray Magaalada Garoowe.